ဂျပန်တွေ ကြက်ဥအစိမ်းစားရတာ ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရင်း! - JAPO Japanese News
သော 16 Oct 2020, 10:02 မနက်
Tamago Kake gohan ဆိုတာက ထမင်းပေါ်မှာ ကြက်ဥတင်ထားတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဂျပန်အစားအစာများထဲမှာ ရိုးရှင်းသော်လည်း မယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ နံနက်စာအဖြစ် အများအားဖြင့်စားလေ့ရှိကြပြီး မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Tamago Kake gohan ကို Gine no Saji (Silver Spoon) တွင်ဖော်ပြခံထားရသောကြောင့် ပြင်ပနိုင်ငံများတွင်ပါ ကျော်ကြားမှုအချို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ anime ပရိတ်သတ်များအနေဖြင့်လည်း anime ထဲမှာ အများအားဖြင့်တွေ့မြင်ရလေ့ရှိပြီး အပြုသဘောဆောင် သိလိုစိတ်ပြင်းပြကြသော်လည်း၊ ဂျပန်မဟုတ်သူများကတော့ TKG နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိသည့်တစ်ခုကတော့ ကြက်ဥအစိမ်းတွေစားတာဟာ ဘေးကင်းရဲ့လားဆိုတာကို စိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်မိကြတာပါ။
နိုင်ငံအများစုအတွက်တော့ ကြက်ဥအစိမ်းစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံမှန်စိုးရိမ်ခြင်းရှိက ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဥမှ Salmonella အဆိပ်သင့်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဗိုက်နာခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်းနှင့် ၀ မ်းလျှောခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေပြီး လေးရက်မှခုနစ်ရက်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ Salmonella သည်သေစေနိုင်သည်အထိအန္တရာယ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် စွန့်စားပြီးတော့ ကြက်ဥအစိမ်းများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာစားသုံးနိုင်သည့် နည်းလမ်းကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်၌ကြက်ဥထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်တင်းကြပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများကြောင့် Salmonella ဥကိုစားခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းနှင့်နီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကြက်ခြံများအတွက် သန့်ရှင်းရေးစည်းမျဉ်းများသည်လည်း အခြားနိုင်ငံများထက်ပိုမိုတင်းကြပ်ထားပါတယ်။ အင်းဆက်များနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့သောကူးစက်ရောဂါများ၏ရင်းမြစ်များနှင့်ထိတွေ့မိခြင်းမှကာကွယ်ရန်အပိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားခြင်းတွေကိုလည်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ၎င်းသည် ကြက်များကိုယ်တိုင် salmonella ကူးစက်ခံရခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည့်အတွက်လျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ ကြက်ဥသို့ကူးစက်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြက်ဥများကိုစုဆောင်းရသည်နှင့် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စစ်ဆေးခြင်းခံရမှာပါ။ ကြက်ဥတစ်လုံးချင်းစီကို အက်တမ်ဖြင့်ဆေးကြောခြင်း၊ ပိုးသတ်ခြင်းနှင့်အက်ကွဲခြင်း၊ ဖုန် (သို့မဟုတ်) သွေးအစက်အပြောက်များကဲ့သို့သော ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြဿနာများကိုစစ်ဆေးပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများနှင့်မစုံလင်မှုရှိသောဥများကိုတော့ စွန့်ပစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် အရည်အသွေးပြည့်တဲ့ကြက်ဥများကို စတိုးဆိုင်များသို့ချက်ချင်းတင်ပို့ပြီး အလွန်အမင်းလတ်ဆတ်သောအချိန်တွင်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ ကြက်ဥများကိုကုန်ကြမ်းများကဲ့သို့စားသုံးကြပြီး အခြားနိုင်ငံများထက်များစွာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ဒါကြောင့် ကြက်ဥအစိမ်းတွေကို စိတ်ချလက်ချစားကြတာပေါ့နော်။
ကဲ . . . ကြက်ဥအစိမ်းကို ဘေးကင်းစွာစားသုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြပြီးပြီဆိုတော့ ဘယ်လိုစားကြသလဲဆိုတာပြောပြမယ်နော်။
Tamago Kake gohan ကတော့ အရသာရှိသကဲ့သို့ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းမှာအလွန်လွယ်ကူပြီးအခြေခံအားဖြင့် သုံးမျိုးသာလိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်လူကြိုက်များတဲ့ပြုလုပ်နည်းတွေလည်းကွဲပြားမှုများစွာလည်းရှိပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဂျပန်ဆန်ကိုပန်းကန်လုံးထဲသို့ယူပြီးလျှင် ကြက်ဥကိုနေရာချရန် ထမင်းရဲ့ အလယ်ပိုင်းတွင်အခန်းအနည်းငယ်စာချန်ပြီးတော့ ကြက်ဥအစိမ်းကို ဖောက်ထည့်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ဂျပန်ပဲငံပြာရည်လေးစမ်းပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။အချို့လူများကကြက်ဥကိုမွှေပြီး သီးခြားပန်းကန်လုံးထဲထည့်ပြီးမှ ထမင်းအပေါ်ကိုတင်ပြီးစားကြပါတယ်။ အချို့ကကြက်ဥအကာကိုမကြိုက်ကြဘူး။ အနှစ်ထည့်ပြီးတော့ပဲစားကြတာလည်းရှိပါတယ်။Tamago Kake Gohan နှင့်အတူစားတဲ့အခါ လူကြိုက်များတဲ့ Toppingsတွေကတော့
ကြက်ဥ၊ ထမင်း နှင့် Natto တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရိုးရှင်းသော TKG ကတော့ လူကြိုက်အများဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ပြီး ဂျပန်သည် Tamago Kake gohan နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အရူးအမူးဖြစ်သဖြင့် TKG အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့် Natto တောင်မှပင်ရှိပါတယ်။ သို့သော်လူကြိုက်များသောမူကွဲများစွာရှိသည် အချို့လူများသည်ပဲငံပြာရည်အစား mentsuyu ဖြင့်လည်း သုံးဆောင်ကြပါတယ်။
Natto နှင့်အတူ Tamago Kake Gohan
Furikake နှင့်အတူ Tamago Kak
Shirasu နှင့်အတူ Tamago Kake Gohan
ဒီလို Toppings တွေနဲ့အပြင် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အခြားသော Toppings တွေနဲ့ လည်း စားကြပါတယ်။
စျေးလည်းချို၊ လွယ်ကူပြီး၊ အရသာလည်းရှိတဲ့ Tamago Kake Gohan ကို စားသုံးကြည့်ကြပါဦးနော်။
အသီးအနှံတွေရဲ့ အရသာမပျက်သွားစေဖို့ အကောင်းဆုံးသိမ်းဆည်းနည်းများ !!!!